Mandalay Car Accident involved3cars 05/12/2011 8:30pm | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » Mandalay Car Accident involved3cars 05/12/2011 8:30pm
Mandalay Car Accident involved3cars 05/12/2011 8:30pm
Posted by pyiminlu on Dec 5, 2011 in Myanma News |9comments
Mandalay Photo News
People helping the stuck person to get out of car
car head shot
the truck with full load collided the light truck from back
on Mdy-Ygn highway near Set-Hmu 1 on5Dec 2011 around 8:30pm
People using wooden/ metal pole to release the person stuck inside car
car head light, windscreen and bumper
I happened to see the car accident when I came back from Kyauk-se around 8:30pm, on Dec52011. the accident took place on Mdy-Ygn Highway near Set-Hmu 1 where the new look petrol kiosk are recently opened.
According to eye-witness, the light truck was sandwiched by two lorry truck with full load. the light truck collided the front lorry when the lorry stopped suddenly and was bumped by second lorry to become this stage.
there was no causalities but the light truck driver(male) and passenger(female) are badly injured at their legs, but not broken.
After seeing this accident, i felt scary thoughts on my mind as I am also driving this kind of light truck, so called “2007 model” produced from Myanmar Set-Hmu Zone….I also feel that the driver who using this road at this hour has to pay more attention as this is the time when the Mdy-Ygn express buses and lorries with full load travel out of Mandalay.
P.S. Pardon me for using English as I haven’t installed zawgyi font keyboard on my computer and if i lack detailed info on my pic…
ဇော်ဂျီမရှိတော့လဲ သူယောင်မယ်နဲ့ပဲ ပျော်ရတာပေါ့ဗျာ…
ရွာထဲကို သတင်းထောက်တစ်ယောက် တိုးလာတာ ၀မ်းသာသဗျို့ …
thank you for uploaded foto such news in bliss.
afraid of watching those scenes but …gotamessage from ur heart that…
u saw, wrote and share us with ur own mind …
foravaluable news….
ခုတလော ကြားလိုက်ရရင် မထိတ်သာ မလန့်သာတွေ ချည်းပဲ..
နောက်ဆို ကားတွေ က တ၀ီဝီ ဒီထက်တောင် များလာအုန်းမှာ လမ်းတွေက ရှုပ်ရှုပ် ဆိုင်ကယ်တွေက အသောင်းကနင်း.. လူတွေ က စည်းကမ်းမရှိ ဗရမ်းဗတာ ဆေးရုံဆေးခန်းများတော့ စည်ကားအုန်းတော့မှာပဲ ….
ပြီးခဲ့တဲ့ တလကျော်လောက်က အိမ်နား လမ်းထိပ်မှာ ညကြီး ဆိုင်ကယ်က အရှိန်နဲ့ အကွေ့ ၊ကားကလည်း တည့်မောင်းလာတာ ပါဂျဲရို လမ်းမီးတိုင်က မှောင်နေတာ နှစ်ဘက်လုံးအရှိန်နဲ့ ဆိုတော့ ဆိုင်ကယ်က ညှပ်ပါသွားတာ တယောက် က ပေါင်ရင်းကနေပြတ်သွားတယ်ပြောတယ် တယောက်ကလည်း အသဲအသန် မသေဘူးလို့တော့ အသံကြားတယ် မောင်းလာတာက အမျိုးသမီးတဲ့ ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ မောင်းပြေးသွားတာ ခုထ်ိလက်သည် မပေါ်ဘူး
မှားတာတော့ နှစ်ဘက်လုံးမှား ကြတာပဲလေ။
မသေရုံတမည်ပါပဲ အင်း နောက်ဆို ပိုလို့သာဆိုးမယ်ထင်တယ်…
အဲ့ဒီလို ဖြစ်သွားတော့ အဲ့ဒီလမ်းဆုံတည့်တည့်မှာ အခုတော့ လမ်းမီးတိုင်ကြီး ထိန်နေတယ်..
နောက်အဲ့ဒီထက်ပိုဆိုးတာက အခုရက်ပိုင်းမှာ မနက် ကျောင်းသွားရုံးသွား ရှုပ်တဲ့ အချိန် စက်ဘီးနင်းလာတဲ့ အလုပ်သမတယောက်ကို အမြန်မောင်းလာတဲ့ လိုင်စင်မဲ့ တရုတ်ဆိုင်ကယ်က လူတွေ ရှုပ်ယှက်ခတ်နေတဲ့ကြားမှာ ၀င်တိုက်သွားတာ ပြီးတော့ လှည့်တောင် မကြည့်ဘူး မောင်းပြေးတာ နံပါတ်မပါ လူမသိနဲ့ ဘေးက လည်း လိုက်တော့ လိုက်ပေးတာပဲ သို့သော် လွတ်သွားတယ်
သူလို အမြန်နှုန်းနဲ့ မမောင်းရဲကြတော့ လွတ်သွားကြတယ်
ဖြစ်တဲ့ကောင်မလေးကတော့ လက်မှာ စတီးချောင်းထည့်လိုက်ရတယ်
ဒီလိုမျိုး အမှုတွေမှာ ခံရတဲ့ သူတွေကတော့ အသက်မသေတာတော့ ကံကောင်းပေါ့ သို့သော် ဘယ်သူမှ ဘာမှ လည်း လုပ်မပေးဘူး ဒီလိုနဲ့ပဲ ပြီးသွားကြတယ် ဆိုတော့…
ရှေ့လျှောက် …… အသက်ကို ဖက်နဲ့ များ ထုတ်ထားရမလား မသိဘူး..
ပုံလေးတွေနဲ့ စုံနေအောင် စက်ရပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ပေးနှိုင်စွမ်း ကို
အထူးကမ်းလင့် ကြိုဆိုပါတယ်။ ည (၈ခွဲ) သတင်းကို ညတွင်းချင်းတင်ပေးတဲ့
သတင်းဆရာ အထူးဓာတ်ပုံဆရာ တစ်ဦးအဖြစ် ကို ပြည်မင်းလွင်ကို
ဂေဇက်အနေနဲ့၎င်း၊ မန္တလေးသူ/သား အချင်းချင်း အဖြစ်၎င်း၊
လိုက်ထရပ်တွေ ဟိုင်းအေ့စ်တွေ စီးရမှာ ခပ်လန့် လန့် ပဲ။ တိုက်မိလို့ ကတော့ မောင်းတဲ့သူနဲ့ဘေးကထိုင်လိုက်တဲ့သူကတော့ မလွယ်ဘူး။ အဲဒီကားတွေမောင်းရင် ပိုသတိထားရမယ်။
ဒါတွေရဲ့ တရားခံကတော့ စည်းကမ်း ရှိမှု မရှိမှုနဲ့ ဆိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ် လူလဲလူစည်းကမ်း ယာဉ်စည်းကမ်း
ရှိကြမယ်ဆိုရင် ထပ်ပြီးသီးခံမှု့ တရားလေး ရှိနေမယ်ဆိုရင် ဒီလိုသတင်းဆိုးတွေ လျော့နည်းသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်
ဒါက မနိုရဲ့ ထင်မြင်ချက် လေးပါ
ကိုပြည်မင်းလူ ပို့ စ်ကို ဖတ်အပြီး ခန့် မှန်းကြည့်မယ်
ကိုပြည်မင်းလူ ဟာ သတင်းထောက်ကောင်းတစ်ယောက်ဘဲ ဖြစ်ရမယ်
မီဒီယာခေတ်မှာ အချိန်နဲ့ တပြေးညီ သတင်းပေးနိုင်သူတွေရှိလာတာ ၀မ်းသာစရာပါပဲ … ။ သတင်းထောက်တစ်ယောက်ရွာထဲရောက်လာတာ ကြိုဆိုပါတယ် ။
ကားတွေကလည်း ကားတွေ … ကိုယ်တိုင်မဖြစ်သေးတော့လည်း … မကြောက်ဘူး … ရမ်းရမ်းကားကား မောင်းနေကြတုန်း .. ညဘက်တွေဆို ပိုဆိုးတယ်
ကွန်မန့်များအားလုံး အတွက် ကျေးဇူးပါ။
@ မှော်ဆရာ- သူယောင်မယ်နှင့် မပျော်ရခင် ဇော်ဂျီရောက်လာသဖြင့် မပျော်လိုက်ရကြောင်းပါ။ ကြိုဆိုမှုအတွက် ကျေးဇူးပါ။
@ Nishida- I hadabit of hesitation to watch those scene, too. Later, I found out the situation was not that bad and my intention to share with MG made me overcame those fear and took pictures.
@ pooch- ဟုတ်ပါတယ်။ ဘာမှ မဖြစ်ရင် ဘာမှ မဖြစ်ပေမယ့် ဖြစ်လာခဲ့လျင် ဆုံးရှုံးမှု ကြီးမားကြောင်းပါ၊ ကျွန်တော်ကဖြင့် မန်းလေးမှာ ပွဲတော်ရက်များအတွင်း ကား၊ ဆိုင်ကယ် တတ်နိုင်သရွေ့ မမောင်းပါ။ မြန်မာတွေ ပျော်လာရင် ပျက်လာတာကို ရှောင်ချင်လို့ပါ။
@ TTNU- ကြိုဆိုမှုအတွက် ကျေးဇူးပါ။
@ E.T- အမြင်ချင်းတူပါတယ် ခင်ဗျာ။ အထူးသဖြင့် တိုက်ခံရတဲ့ကားကို မြင်ပြီးတော့ပေါ့။ ကားခေါင်းရဲ့ သံထည်က စီးတဲ့သူ ခြေထောက်နားထိ ရောက်သွားတဲ့ မြန်မာ့ စက်မှုဇုန်ရဲ့ အားထားရတဲ့ အနေအထားကို ပေါ့။
@ Novy- ကျွန်တော်ကတော့ စည်းကမ်း၊ သည်းခံမှု အပြင်၊ ကိုယ်ချင်းစာတတ်မှု၊ ဦးစားပေးချင်စိတ် ရှိမှု ဆိုတဲ့ အချက်လေးများပါ ထပ်ဖြည့်ချင်ပါကြောင်း။
@ windtalker- တစ်လုံးတည်းနဲ့ ဖြေမယ်။ NO!. :). ဒါပေမယ့် MG မှာ ဒေသ သတင်းတွေကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ အားလုံးကို share နိုင်ဖို့ အတွက်တော့ member ကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်အောင်တော့ ကြိုးစားပါ့မယ်။
Again, အားလုံးကို ကျေးဇူးပါ။